Xarunta Xuquuqal Iinsaanka Oo Canbaaraysay Xadhiga Wariye Soofadhiiste Iyo Suldaan Sabayse |
Xarunta Xuquuqal Iinsaanka Oo Canbaaraysay Xadhiga Wariye Soofadhiiste Iyo Suldaan Sabayse
Hargeisa(GNN):-xarunta xuquuqal iinsaanka ayaa si adag u canbaaraysay xadhiga lagula kacay wariye Maxamed Cabdilaahi Soofadhiiste oo lagu xidhay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera.
Warsaxaafadeed ka soo baxay xarunta xuquuqal iinsaank ayaa sidoo kale lagu canbaareeyey xadhiga suldaan Sabayse, kaas oo u dhignaa sidan “Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay si adag u canbaaraynaysaa xadhigga weriye Maxamed Cabdilaahi Soo fadhiiste, tafatiraha bogga interneetka ee Berbera Today islamarkaana ah weriye ka tirsan telefiiishanka Somali Cable. Maxamed waxa lagu xidhay 24kii September 2015 magaalada Berbera kadib markii uu sii daayey war ku saabsan buuq ay dad ku sameeyeen wasiirro ka qayb galay Ciidkii. Warbixinta uu weriyuhu sii daayey waxay ku saabsanayd qaylo ay dad ku sameeyeen wasiirro ka soo qaybgalay Ciidda oo ka hadla
arin muran ka taagan yahay oo ku saabsan wareejin la sheegay in lagu samaynayo Haamaha Shidaalka Berbera. Dawladda ayaa soo jeedisay inay ku wareejiso shirkado gaar loo leeyahay Haamaha Shidaalka. Dhaqanka xadhigga weriyayaashu waa mid ku soo noq noqday Somaliland. Falalkaas oo xad gudub ku ah qodobka 32aad ee dastuurka oo damaanad qaaday madaxbanaanida saxaafadda.
Sidoo kale waxa 20kii September lagu xidhay Berbera weriye kale Cabdiraxmaan Maxamed Cige oo loo xidhay isla arin khuseeya Hamaha Shidaalka Berbera. Waxa la sii daayey 21kii bisha.
Suldaan Mawliid Cali Sabayste ayaa 17kii September laga xidhay magaalada Hargeysa kadib markii uu dawladda ku canbaareeyey arimo la xidhiidha Haamaha Shidaalka. Suldaanka waxa la xidhay iyada oo aanu jirin amar qabasho oo ka soo baxay Maxkamad.
Mar kasta oo weriyayaashu ka hadlaan arin la xidhiidha musuq maasuq ama maamulka hantida waxay u badan tahay in la xidho. Xaruntu waxay si adag u canbaaraynaysaa xadhiga weriyaha iyo suldaanka. Dawladdu waa inay joojisa cadaadiska saxaafadda. Waxannu ugu baaqaynaa dawladda Somaliland inay xorriyadooda u soo celiso weriye Maxamed Cabdilaahi Soo fadhiiste iyo Suldaan Mawliid Sabayste.